Visa mpizahatany karana ho an'ny mpandeha sambo fitsangantsanganana
Visa mpizahatany indianina ho an'ny mpandeha sambo fitsangantsanganana
Ho an'ireo mpizahatany izay te-hitety izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny sambo fitsangantsanganana dia lasa toerana vaovao malaza i India. Ny fitsangatsanganana amin'ny alàlan'ny sambo fitsangantsanganana dia mamela anao hahita bebe kokoa ity firenena kanto ity noho ny hitan'izy ireo tamin'ny fomba hafa. Miaraka amin'ny e-Visa Indiana Fahefana misahana ny fifindra-monina any India nahatonga azy ho tsotra sy mora ho an'ireo mpandeha sambo Cruise hitsidika an'i India.
Ny sambo fitsangantsanganana dia sariaka ao amin'ny fianakaviana, afaka mitsidika toeran-javatra maro ianao ary manongotra indray mandeha monja ary mankafy torapasika maro eny an-dalana. Governemantan'i India Nanamora ny fomba fifindra-monina ho an'ireo mpandeha sambo fitsangatsanganana amin'ny alàlan'ny fanomezana Electronic Travel Authority na Indian e-Visa. Azonao atao ny mangataka Fangatahana fangatahana Indiana Visa amin'ny famenoana endrika tsotra amin'ny Internet.
Seranam-piaramanidina nahazo alalana ho an'ny e-Visa Indiana
Misy seranan-tsambo 5 nahazo alalana ho an'ireo mpandeha sambo fitsangantsanganana mitazona e-Visa Indiana. Ny sambo fitsangantsanganana dia tsy maintsy mivoaka ary mijanona fotsiny amin'ny fifangaroan'ny seranana manaraka. Ireo mpizahatany amin'ny fitsangantsanganana an-tsambo izay mijanona amin'ny seranana an-dranomasina rehetra izay tsy voatanisa etsy ambany dia mila mangataka visa taratasy nentim-paharazana mankany India. Mila mandefa antontan-taratasy amin'ny alàlan'ny paositra ianao ary mety ho takiana amin'ny fitsidihana ny masoivoho Indiana / Komisiona avo.
Jereo ny lisitra hahalalana ny daty seranan-tsambo ho an'ny fidirana ara-dalàna mankany amin'ny turista Visa.
Ho an'ny fijanonana mihoatra ny 2 dia takiana ny visa fizahan-tany any India mandritra ny 1 taona
Ataovy ao an-tsaina fa ny fijanonana tsirairay avy dia misy fanekena ao amin'ny seranan-tsabatra ataon'ny mpiasa Indiana Immigration Border alohan'ny hidiranao miaraka amin'ny Indian Online Visa (eVisa India). Raha misy ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo izay mijanona mihoatra ny 2 dia aorian'izay, 30 andro Ilay e-Visa mpizahatany ho any India (Visa fidirana indroa) dia tsy mitombina ary tsy maintsy mangataka mandritra ny 1 taona (fidirana marobe) visa e-Tourista ianao. Ataovy ao an-tsaina fa ny fijanonana rehetra dia tokony ho seranan-tsambo fidirana ekena miaraka amin'ny e-Visa karana. Mifandraisa amin'ny orinasan-tsambo fitsangantsanganana momba ny antsipiriany manodidina ny fijanonana any India satria hamonjy anao amin'ny fahasahiranana sy aretin'andoha be dia be izany. Ireo mpizaha tany te-hitsidika ny Indiana amin'ny alàlan'ny sambo fitsangantsanganana ary mijanona fotsiny amin'ny seranan-tsambo ara-dalàna voatanisa etsy ambony dia tokony hangataka an Visa Indiana An-tserasera (eVisa India).
Ireo mpizaha tany dia manana safidy hamandrika an'i India Visa Onlne alohan'ny hamandrihana ny slot ho an'ny sambo fitsangantsanganana na aorian'ny famandrihana ho an'ny sambo fitsangantsanganana. Ny mpandeha sambo fitsangantsanganana tsirairay dia mila mampihatra e-Visa karana satria tsy misy vondrona e-Visa misy.
The antontan-taratasy takiana dia:
Pasipaoro ankehitriny miaraka amin'i herin'ny 6 volana manomboka amin'ny datin'ny fahatongavana
Sary na scan an'ny pejin'ny biograpia manokana an'ny pasipaoro. Tokony ho hita mazava ny fampahalalana. Fangatahana fahazoan-dàlana ho an'ny India visa tsy maintsy hihaona.
Ny pasipaoro dia tsy maintsy atao mahazatra ary tsy pasipaoro diplomaty na ofisialy na mpitsoa-ponenana.
Mila manome sarin'ny tavanao ianao, toy ny sary nalaina tamin'ny findainao.
Ny sarinao dia tsy maintsy mampiseho mazava ny endrikao tsy misy sakantsakana Vakio ny Fangatahana sary India Visa ary raha mbola manana olana amin'ny sarinao ianao dia andefaso mailaka amin'ny mpiasanay ao amin'ny birao fanampiana visa any India ny sarinao ary izy ireo no hanamboatra sary ho anao.
Fomba fandoavam-bola toy ny Debit na Credit Card (Mastercard, Visa), Union Pay, Paypal sns.
Ny antsipiriany momba ny dianao, ny mombamomba anao ary ny antsipirian'ny fifandraisanao ao amin'ny firenenao.
Ianao dia TSY nila nitsidika ny masoivoho indianina na any amin'ny biraon'ny Governemanta Inde.
Fampahalalana momba ny angona biometrika
Ny Manampahefana misahana ny fifindra-monina Indiana dia misambotra ny mombamomba ny biometrika avy amin'i mpandeha sambo filomanosana isaky ny mitsidika an'i India izy ireo. Na izany aza, ity fomba ity dia maharitra ela loatra ho an'ireo mpandeha sambo fitsangantsanganana, izay mety tsy hahita fahitana ny sasany tamin'izy ireo nijoro tamin'ny filaharana. India dia mampiasa vola amin'ny fanavaozana ny rafitra manangona angona biometrika, hahafahan'izy ireo mamindra ny mpandeha sambo fitsangatsanganana amin'ny alàlan'ny fomba haingana sy haingana kokoa ary nampiato ny fanangonana biometrika hatramin'ny alin'ny Taom-baovao 2020.
Mahazo ny marina E-Visa Indiana ho an'ny sambo fitsangantsanganana mankany India dia mahitsy sy tsotra. Tokony ho azonao antoka fa miantsona amin'ny seranan-dranomasina manam-pahefana ny sambo fitsangantsanganana. Azo antoka indrindra ny fangatahana mandritra ny 1 taona Visa fizahan-tany any India. Ny Visa fizahantany 1 taona ho an'i India dia visa fidirana marobe.
Vazaha mpizaha tany eto India ho an'ny sambo Cruise: Fampahalalana lehibe ho an'ny mpandeha
Ny mpandalo amin'ny firenena mahay dia tokony hirotsaka an-tserasera herinandro alohan'ny datin'ny fahatongavany.
Amin'ny pasipaoro tsotra ihany no ahazoana azy.
Ny e-Visa Indiana 1 taona dia manome anao fahafahana hijanona 60 andro any India.
Ny Visa elektronika dia tsy azo itarina ary tsy azo averina.
Ny antsipiriany biometric amin'ny olona tsirairay dia tsy maintsy alaina any amin'ny fifindra-monina rehefa tonga any India.
Tsy azo ovaina ny Visa mpizahatany amin'ny fahatongavany
Ny e-Visa Indiana dia tsy mitombina amin'ny fitsidihana cantonment na faritra arovana / voafetra na tafika
Ny valin'ny Visa Turista 1 taona dia hatramin'ny datin'ny namoahana azy.
Ny fahamendrehan'ny Visa mpizahatany 30 andro dia manomboka amin'ny datin'ny fahatongavana fa tsy ny datin'ny famoahana, tsy toy ny Visa 1 mpizahatany
Ianao dia asaina hangataka Visa mpizaha tany mandritra ny 1 Taona fa tsy 30isa mpizahatany Visa
Ny olom-pirenena avy amin'ny firenena voan'ny areti-mifindra dia tokony hitondra karatra fanaovana vaksiny tazo mavo amin'ny fotoana hahatongavana any India, raha tsy izany dia mitoka-monina mandritra ny 6 andro izy ireo rehefa tonga any India.
Mila manome scan na sary an'ny tarehy sy pejy voalohan'ny pasipaoro ianao
Hamarino tsara fa efa nanamarina ny fahazoana mandray ny visa any India.
Olom-pirenena Etazonia, Olom-pirenena anglisy, Teratany Kanadiana ary Teratany frantsay afaka ampiharo an-tserasera ho an'i India eVisa.
Mangataha e-Visa karana 4-7 andro mialoha ny sidinao.
Fampiharana ho an'ny e-Visa Indiana